တနသာင်္ရီတိုင်း မြိတ်မြို့မှ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီ အန္တရာယ်.. ~ ဒီမိုဝေယံ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း 10 တန်းစာမေးပွဲဖြေသူများထဲတွင် admin များပါနေ
သည်ကတစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာတွင် စာမေးပွဲရှိသူများကြောင့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့အနေဖြင့်အနည်းငယ်ငြိမ်ချက်သားကောင်း
သုံးသပ်ပြီး ရေးသားဖို့ စီစဉ်နေခဲ့တာပါ။ ကဲအခု လတ်တလောမြိတ်မှာ ဖြစ်နေ
တဲ့ ဘင်္ဂါလီများဝင်ရောက်လို့ လိုက်လံဖမ်းဆီးရတဲ့သတင်းလေးကနေစလိုက်
ဘင်္ဂါလီများဟာမြိတ်မြို့ ကို တစ်လအတွင်း တစ်ရာကျော်ဝင်
ကြိမ်တုန်းက 41 ဦးကို ထောင်တစ်နှစ်ချလိုက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဝင်ရောက်
လာတဲ့ 96 ဦးလောက်ကို လည်းဖမ်းဆီးရမိထားပြီး.. 25.3.2013 ရက်နေ့
တနင်္လာနေ့မှာ အမိန့် ချမှတ်မယ်လို့ သိရတယ်။
မြိတ်ကို တစ်ကြိမ်မက နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်လောက်အထိဝင်ရောက်နေတာကို
News Of Myeik မှသုံးသပ်မိတာလေးတွေတင်ပြပါ့မယ်။ ( နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်
ဟုသုံးနှုန်းရခြင်းမှာလည်းပြီးခဲ့သည့် 2012 နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်လည်း 78 ဦးကို
ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်) ဒီလိုဝင်ရောက်နေတာကို သုံးသပ်ရရင်
ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ စတင်သုံးသပ်ရပေမည်။
လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာ ချထားတယ်ဆိုတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကနေ ဒီဘင်္ဂါလီတွေလှေအစီး
လိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဘာကြောင့် ထွက်လာနိုင်တာလဲ ? ဖွံ့ဆိုဒ်တွေနှင့်
ဖွဘွတ်တွေက ဖွထားတဲ့အတိုင်း ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှကနေ ရခိုင်ကိုခိုးဝင်၊ ရခိုင်က
နေ ထိုင်းကိုသွားဖို့ ဆိုတာဌက်ပျောသီးအခွံနွာသလိုဖြစ်နေမလား ?ကျွန်မတို့
စုံစမ်းထားသမျှတင်ပြရရင်.. ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လုံးဝ
နေနိုင်တဲ့အနေထားမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီများကို ရခိုင်ပြည်နယ်က ဌာန
ဆိုင်ရာတစ်ချို့ နှင့် လူပွဲစားများပူးပေါင်းကာ ဘင်္ဂါလီများကိုလွတ်ထုတ်နေ
တဲ့သတင်းတွေကြားရပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ အမှန်တရားကိုမြတ်
နိုးသူများ Action ယူလို့ရတယ်နော်..သတင်းတွေလှမ်းပိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ။ )
အဲဒီမှာ နစက၊ လုံထိန်း၊လ၀က နှင့်တခြားလက်နက်ကိုင်သူတစ်ချို့လည်းပါ
နေတယ်လို့ သိရတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂါလီတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်း
အောင်လုပ်မယ် တခြားပြည်နယ်တွေမှာ တာဝန်ပိချင်ပိပါစေ.. ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်
ချက်လုပ်နေတာလို့ သိရတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေထွက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်
လျောက်မှာ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျောက်လုံး မျက်စီမှိတ်ရူးချင်ယောင်
ဆောင်ကြတယ်။ လမ်းမှာတွေ့ တဲ့ ရေတပ်တွေကလည်း ဘင်္ဂါလီတွေကို
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ကိုလုပ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။တဖက်ကလည်း လူပွဲစား
က လှေတွေစီစဉ်ပေးပြီး လှေပေါ်ကိုတင်လွတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီလိုဖြစ်
ရပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာကို ကျွန်မတို့ ဘိတ်က တာဝန်ရှိသူ၊ဌာနဆိုင်ရာတွေ
အာဏာပိုင်တွေတစ်ကယ်မသိရီုးအမှန်ပါ။ (တစ်ကယ်လည်း ကျွန်မတို့ ဘိတ်
ကိုပဲ ထိုင်းနိုင်ငံလို့ ထင်ပြီးဝင်နေတယ်လို့ မှတ်ထင်နေပါတယ်။တစ်ကယ်
တော့ ဒီဘင်္ဂါလီတွေဝင်ရောက်လာတာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလို၊ နောက်ကွယ်က
ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘိတ်က ကူညီတဲ့သူတွေရှိပါတယ်)ဌာနဆိုင်ရာတွေအ
နေနှင့်ကတော့ ၀င်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကိုဖမ်းကြ၊ ကူညီမိတဲ့သူတွေကိုလည်း
ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကြနှင့် အလုပ်အတော်ရှုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ သုံးကြိမ်
လောက်အထိ ဆက်တိုက်ဝင်လာကြလို့ ဘိတ်မှာကူညီတဲ့သူတွေ၊ အချိတ်အ
ဆက်လုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်း မိထားတယ်လို့ သိရတယ်။
အထိ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်း၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ၀င်လာတာဘာကြောင့်
လဲ ? ပုစွန်ပိုက်လှေတစ်စင်းကိုတောင် အလွတ်မပေးပဲ လမ်းကနေဒီဇယ်တွေ
တောင်းတတ်တဲ့ မြန်မာ့ဆီတပ်မတော်က ရော ဒီဘင်္ဂါလီတွေအစုအပြုံလိုက်
၀င်လာတာ ဘာကြောင့်လွတ်လိုက်တာလဲ? ကမ်းခြေစောင့်တွေ၊ပင်လယ်ပြင်
စိုးမိုးရေးတွေ၊ မမြင်ကြဘူးလား ? မြိတ်ကို မှဘာကြောင့်တန်းပြီးဝင်လာကြ
တာလဲ ? ဘင်္ဂါလီတွေဝင်လာတုန်းက မီဒီယာတွေဘာကြောင့်ငြိမ်နေကြတာ
လဲ ? ။
မြိတ်က ဌာနဆိုင်ရာတွေ ဖိအားများသလို၊ မြိတ်မြို့ က မွတ်စလင်တွေမှာ
လည်းအနေစားကျပ်သည့်အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါတယ် ( ကူညီတဲ့သူတွေ
မပါ) ကျေးရွာတစ်ချို့ မှာလည်းခြိမ်းခြောက်မှုတွေနှင့်ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့သိရ
တယ်။ နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေအရ နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်
တဲ့ ဦးရှော်ဘီဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး ၄င်းကိုကူညီတဲ့ သူတွေကိုလည်း
ဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သိရတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေကို ကျွေးမွေးမိတဲ့သူတစ်ချုိ့
လည်း ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ သိရတယ်။
နောက်မဖြစ်လာစေဖို့ ၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ၊ထောက်လှမ်းရေးတွေ၊
မီဒီယာတွေလည်း ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ လူသားတစ်ယောက်
ကိုသနားကြင်နာတတ်တာ၊ ကျွေးမွေးချင်တဲ့စိတ်တွေဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာ
လူမျိုးတွေ၊ ဘိတ်သူ/သားတွေရဲ့ အကျင့်ပါ။ ကူညီမိလို့ ဒုက္ခရောက်သူတွေ
ကျွန်မတို့ ဘိတ်မှာတင်မက ပဲသက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးတွေကနေတဆင့်
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမည်သို့ ထွက်လာသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယခုရောက်ရှိ
နေသော ဘင်္ဂါလီတွေကို လ၀ကစစ်ချက်၊ ရဲစစ်ချက်တွေကို အတည်မယူဘဲ၊
အမှန်တရားကို ပြောနိုင်အောင် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်
နှင့်ဘိတ်ကို ၀င်ရောက်လာနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်သလို ၊
လူသားမဆန်စွာပြုလုပ်နေတဲ့ ဆိုပြီးသတင်းတွေ ထွက်နေတဲ့ရခိုင်က အာဏာ
ပိုင်တွေလုပ်ရပ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း News Of Myeik မှ သုံသပ်